WAALID GARASHO LEH & TABABARE DADAAL BADAN
Nin adduunka joogow maxaa aragti kuu laaban. Xiriirka waalidka, caruurta iyo tababaruhu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Waa waxaa jiri jirtay ilmaha ciyaaraha sida kubadda cagta jeceli ay dayro ahaayeen oo looga tacsiyeen jiray waalidkaasi inuu cunug ka halaabay oo marka caruurta la tirinayo aan sinaba loogu soo dari jirin lagana soo qaadi jiray wax dhintay.
Waxaa la soo maray xilli looba diidi jiray gabdhaha gayaankooda ah marka uu soo hana qaado oo uu haweysto guur iyadoo lagu tilmaami jiray inuu yahay mid aanan waxba dhaqan karin, waa dhab aan markhaati ku furi karo! Waxa xilliba xilli u soo dhiibaba waxaan maanta arkeynaa inta aan xasuusto markii ugu horeysay ee la arko waalidiin Soomaaliyeed oo abaalmarin qaali ah siiyey tababaraha caruurtooda iyaga oo ugaga mahadceliyey sida wanaagsan ee uu guud ahaan gacanta ugu hayo caruurta yaryar.
Hadda akhristow labadan waalid oo kala ah Mukaram Gelle iyo Warda Bixi oo iyada laftigeedu galisay wakhti badan horumarinta caruurta yaryar ee magaaladda Toronto ee dalkani Canada gaar ahaan naadiga DIXON FC iyo waliba AFRO-CANADIAN SC ayaa waxay fureen bog cusub oo aan horay looga baranin waalidiinta Soomaaliyeed. Tababare Ahmed Bakari oo ku magac dheer Mahamaadi ayaa guddoomay abaalmarintan wuxuuna ugaga mahadnaqay waalidiintan xilkasnimadooda isagoo ku booriyey waalidka kale inay qaadaan talaabo la mid ah midda ay qaadeen Mukaram iyo Warda, khayr iyo ajar badan Allaha siiyee.
Tababare Mahamaadi wuxuu ka mid ahaa weeraryahanadii soo maray Somaaliya gaar ahaan gobolka Jubadda Hoose-Kismayu oo ahayd hooyga Kubadda Cagta Soomaaliya, wuxuuna ku guuleystay in ka badan 5 horyaal oo goboladda ah waxaana ka mid ahaa 1981 iyo 1982 dii oo ay final isugu yimaadeen Shabeeladda Dhexe-Jowhar iyo Banaadir sida ay u kala horeeyaan. Tababare Mahamaadi waxaa hadda kaalintiisa mustaqbalka buuxin doona Yasir, Sabir, Qariidi Yare oo uu dhalay iyo waliba caruur yar yar oo uu tababaro sida Nabil Gelle, Adam Gelle, Abdirahman, Guled, Ali Ahija, Mohamed Codka, Bilal Kamal, Mohamed Ali Farey iyo kuwo kaloo badan oo kor u dhaafaya 100.
Mahamaadi, Mukaram iyo Warda waxay mahad badan u celinayaan shabakadda www.xiddigaha.com iyo Journalka Somali Canadian Times, tababarayaasha kale Dixon FC iyo dhammaan kooxaha ka tirsan Afro-Can SC waxayna ku dhiiri galinayaan inaysan ka caajisin howsha ay u hayaan caruurta Somaaliyeed ee tiradoodu kor u dhaaftay 600 ee ku nool magaaladda Toronto iyo nawaaxigeeda.